Meelo tagidda Best In Europe Si socda lagu guda jiro Weekend A | Save A tareenka
Home > safarka Europe > Meelo tagidda Best In Europe Si socda lagu guda jiro Weekend A
Ilaawaan diyaarad ee tareenka iyo safri Yurub Wonder Weekend a. Save A Tareen wax fudud inay jartaan daqiiqo gudahood oo aan ajuurada ku daray, si aad ku raaxaysan kartaa kaydka on hawlaha! Halkan waxaa noo doorasho ee Meelo tagidda ugu fiican Yurub ay u safraan inta lagu jiro todobaadkan a tareen.
Best Gateway Meelaha Yurub ay u safraan inta lagu jiro todobaadkan a: Barcelona
Waxaan sheekeysanaynay ku saabsan Spain dhawr jeer. Waxaad ka soo hubin kartaa articles kale halkan. maanta, Talooyin our waayo, Meelo tagidda ugu fiican Yurub ay u safraan inta lagu jiro todobaadkan a tareen waxaa diiradda kaliya on Barcelona.
Barcelona waa wax fudud si ay u helaan ka qaybo badan oo Europe, laakiin fududeeyo tixraac ahaan, waxaan doonaa in la tago ka London safarka this. Leave shaqada 2 pm on Friday ah, Wakhtiga qabsado ah 3 pm Eurostar in Paris. Waxaa la joogaa wakhtigii loogu talagalay oo keliya Rouge Vin ah in a cafe PSG ka hor loo hoydo ah "hotel tareen" in Barcelona.
Hadda oo aad halkaas ku tahay, waxa la sameeyo:
Malaha qaabka ugu caansan ee Barcelona, ah Sagrada Familia. Basilica ayaa waxaa loogu talagalay by dhise Gaudi oo ay la dhiso qaab-dhismeedka this tan 1882. Waxaa dhib sawir aan wiish, laakiin waxaa hubaal waa booqashadii ah oo ku kacaya.
Secret tip Barcelona: On hoosba of Basilica waxaa balli yar ka meesha aad ka qaadi kartaa sawiro cajiib ah. Ka dhig ciyaarta Instagram aad u xoog badan, oo meeshan bixiso booqasho.
AQaab dhismeedka caanka nother by Gaudi waa Casa Batllo. Waxay ku taallaa aan ka fogayn Las Ramblas, waxaad ka heli doontaa dhismaha gaarka ah ee de Passeig ku Gracia. Waxaa la dhisay 1877. Haddii aad sheeegateen oo booqday dhismaha iyo raba in aad u arko gudaha, hubi in aad tigidh ka hor iibsato, waa a soo jiidashada dalxiiska caanka ah ee Barcelona iyo ka heli karaan kuwo mashquul, gaar ahaan xilli sare.
Xaqiiqada Fun: Milkiilaha hadda ee Casa Batllo waa qoyska Bernat ah, loo yaqaanay mulkiilayaasha nac nac Chupa Chups.
Time in ay aadaan dalkooda.
The 9 pm train hotel habeenka axada wuxuu kugulaaban doonaa bartamaha London at 11:55 waxaan ahay on Monday.
Best Gateway Meelaha Yurub ay u safraan inta lagu jiro todobaadkan a: Rome
City weligeed ah waa sida loo qurxiyay sida weligiis iyo waxaan aan la hadli kartaa ee ku saabsan cararaan Weekend ah, iyada oo! Qaado qadada ah Eurostar iyo isbedelka ee Paris, waayo, Rome. Raagayn badan casho ee baabuur makhaayad, fariisto si aad u qarsoodiga ah ama couchette Habeenka, iyo toosin in muuqaalka a classic Talyaani.
Rome si fudud waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu jeceshahay in Europe. Gaar ahaan haddii aad tahay on Malabka. Waxaad ka akhrisan kartaa in halkan. Waxaa qof walba wax u kastoo. Meeshu waa buuxiyeen ilaa girgirka leh indhaha iyo waxay leedahay kumanaan sano ee taariikhda Geedka Dhalxiga ah laftiisa ku dul - aad halkan ka arkaynin Guryohoodii mooyee Roman si Renaissance ka heli doontaa wax walba oo tahay. Waxa kale oo ay hoy u tahay fantastic cuntada! Dhab 3 maalmood ee Rome kuma filna si aad u aragto wax walba in magaalada leeyahay in ay bixiyaan, laakiin waxaa xaqiiqo ah oo ku filan si ay u arkaan dhammaan xogta muhiimka ah haddii aad maareeyaan waqtiga aad wax ku ool ah.
Vatican City waa waxa ugu horreeya liiskayaga booqashadaada Rome. Waa dal ee u gaarka ah, gudaha Rome, iyo hoy u tahay goobaha ugu caansan dunida ee ay ka mid yihiin Vatican Museum, Sistine Chapel ah, iyo St. Peter Basilica ee.
Waxaan ku talinaynaa halkan aad hore u iman oo madax toos ah Museum Vatican qaba ka bood khadka tigidh. Waxaan dabooli siyaabo inay u boodboodaan khadadka ee Rome dheeraad ah oo ku saabsan in this post, laakiin haddii aad iibsato Rome Omnia iyo pass Vatican, waxaad yeelan doontaa fursad u pre-ballansan timeslot ah ee aad soo galo boodi laynka.
Best Meelo tagidda Gateway ee Yurub ay u safraan inta lagu jiro todobaadkan a: Brussels iyo Amsterdam
Iyada oo Eurostar ku-xawaaraha sare ee cusub-ish Tabobaro London si Amsterdam. Safarada u dhexeeya London iyo Brussels qaadi jiray 5 saacadood iyo lug is bedel ah tareenada ee Brussels. The doonista cusub tareenka gaadiidka 900 maalin rakaab ah, oo waxay qaadan doonaan oo keliya 4 saacadood. Perfect safar si Brussels ama Amsterdam, waayo, Weekend ka!
Waxa la sameeyo inta lagu guda jiro Brussels todobaadkan a Gateway:
Waxaa jira waxyaabo badan oo la sameeyo Brussels, gaar ahaan safar gaaban todobaadkan. Waa mid ka mid ah magaalooyinka kuwa kaamilka ku tahay sabtida dheer, sahaminta oo dhan taariikhi goobaha iyo vafler oo dhan quudhsashada aad ku heli kartaa gacmahaaga.
Wax macno ah ma leh inta jeer ee aad soo booqato Grand Place, waa aag in had iyo jeer waa sidaas quruxda badan si ay u booqdaan. Shukaansi dib ku dhawaad 300 sano, Grand Place waa mid aad u qurux badan inuu seegi doono.
Mararka qaarkood ee sannadka, waxaad ka heli doontaa dhowr ah dhacdooyinka kala duwan, suuqyada, iyo rakiban tahay. Ha illoobin in ay booqdaan Museum Brussels City iyo Hall Town in labada Shaad on square ah.
Paris Liege Tareenadu
Brussels Liege Tareenadu
Brussels ayaa ugu weyn (iyo suurto gal, grandest ah) maxkamadda ee Yurub oo dhan. Hadda, hadda restorations qaar ka shaqayn joogto ah, laakiin ay tahay in aan joojiyo booqashadaada jiro - runtii waa a dhismaha qurux badan.
Maxaad u malaynaysaa ee talooyinka our? Waxaan jeclaan lahaa in la ogaado! xusuuso, Save A tareenka waa super fudud in ay isticmaalaan oo aan marnaba dhuuntaa kharashka! Ballansan aad Weekend iska tareen nala, maanta!
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, sidoo kale aad qaadi karto sawiro iyo qoraal iyo kaliya na siiso credit la link a si post blog this, ama aad halkan riix: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Feurope-travel-during-weekend%2F%3Flang%3Dso- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
Haddii aad rabto in aad noqon nooca in dadka isticmaala aad, si toos ah aad ku hanuunin karaa bogagga raadinta our. In link this, waxaad ka heli doontaa our jidadka tareenka ugu caansan – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside aad xiriir la leeyihiin bogag ku degtey Ingiriisi our, laakiin waxaan sidoo kale leeyihiin https://www.saveatrain.com/ru_routes_sitemap.xml, oo waxaad bedeli kartaa / ru si / ja ama / TR iyo luuqado badan.
#casabatllo #qasriga cadaalada #xurmada Qoyska #isbuucii Barcelona Eurostar fasaxa travelamsterdam travelrome vaticancity